जान्नुहोस् केटी भर्जिन रहेको कसरी थाहा पाउने ? - Deshko News Deshko News जान्नुहोस् केटी भर्जिन रहेको कसरी थाहा पाउने ? - Deshko News
साधारणतय: योनिच्छेद नफाटेका केटीहरुलाई कुमारी अर्थात भर्जिन भनिन्छ । स्त्रीको योनीको मुखमा टासिएर रहेको नरम र पातलो जालो जस्तो हुन्छ । यो जालो नफाटेकोलाई भर्जिन रहेको र फाटेको पाइमा भर्जिन तोडिएको बुझिन्छ ।